Global Voices teny Malagasy » Ny malaza ao amin’ny tontolon’ny bilaogy Toniziana -okt 2005 · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Novambra 2018 7:02 GMT 1	 · Mpanoratra Mohamed Marwen Meddah Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Namoaka ny fandraketam-peony mivoaka isandroavolana  faharoa ny TuniZika, fandraketam-peo mozika Toniziana voalohany, manasongadina hira avy amin'ny artista vaovao.
Zizou avy any Djerba nanatrika ny fihaonan'ny bilaogera Libaney voalohany  hatramin'ny nandehanany nianatra tany amin'ny AUB. Manoratra momba ny zavatra hitany tany Libanona , ireo toerana samihafa any, ny fiainana, ny kolontsaina sy ny maro ihany koa izy.
Marwen indray nisongadina tamin'ny lahatsoratra momba ny bilaogy tao amin'ny gazetiboky Computer Idee , gazetiboky voalohan-daharana momba ny solosaina ao Holandy.
Adib manoratra ny fomba nisafidianana ny namany Anis Ltaeif hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny SuperStar , endrika Arabo amin'ny Pop Idol, sy ny fomba nanatrehany fakana sary niaraka taminy tao amin'ny tranom-pisakafoanana ao Les Berges du Lac.
K-pax mibilaogy avy ao Montréal, Canada , taorian'ny sidina adiny 10 tao sy adiny 2 ora mahery tamin'ny taratasy fifindra-monina tao amin'ny seranam-piaramanidina. Miandrandra fialan-tsasatra izy ary avy eo manomboka amin'ny fiatiany tao.
Thysdrus manoratra ny sarina lahy antitra teo anoloan'ny coliseum El Jem  hitany tao amin'ny aterineto, ary manontany tena raha toa ka fantatr'ilay olona, ​​izay fantany manokana, fa ao anaty aterineto ny sariny ary mandehandeha manerana izao tontolo izao.
Mitaraina i Keitaro noho ny haratsian'ny tolotra DSL ao amin'ny faritra Hammam Chott , sy ny mpanome tolotra aterineto tsy manana valinteny tsara mihitsy rehefa miantso azy ireo mba hanampy, fa milaza fotsiny fa miady hevitra amin'ny mpandraharaha momba ny fifandraisandavitra izy ireo. Tezitra izy fa mihevitra ny ISP=FAI fa tombontsoa fanampiny ny serasera, kanefa raha ny marina dia zo efa nandoavany vola.
Hatem manoratra momba ny volana masina Ramadany  sy ny fomba nanadinoan'ny olona sasany ny momba izany, manao izany ho volana ho an'ny sakafo. Heveriny fa tokony hiverina ao amin'ny Korany izy ireo mba hampahatsiahivana ny soa rehetra amin'ity volana ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/17/130476/
 Namoaka ny fandraketam-peony mivoaka isandroavolana: http://tunizika.blogspot.com/2005/09/tunizika-02.html
 nanatrika ny fihaonan'ny bilaogera Libaney voalohany: http://zizoufromdjerba.blogspot.com/2005/09/mon-premier-meet-up-au-liban.html
 Manoratra momba ny zavatra hitany tany Libanona: http://zizoufromdjerba.blogspot.com/
 nisongadina tamin'ny lahatsoratra momba ny bilaogy tao amin'ny gazetiboky Computer Idee: http://www.subzeroblue.com/archives/2005/09/computer_idee.html
 nisafidianana ny namany Anis Ltaeif hiatrika ny fihodinana faharoa amin'ny SuperStar: http://adibs1.hautetfort.com/archive/2005/09/30/votez-anis-ltaif.html
 mibilaogy avy ao Montréal, Canada: http://k-pax.hautetfort.com/archive/2005/09/29/k-pax-a-montreal.html
 sarina lahy antitra teo anoloan'ny coliseum El Jem: http://thysdrus.blogspot.com/2005/09/eljem-que-jaime.html
 haratsian'ny tolotra DSL ao amin'ny faritra Hammam Chott: http://it-anime.blogspot.com/2005/09/adsl-de-merde.html
 manoratra momba ny volana masina Ramadany: http://www.phpmagazine.net/1_ill_blog_your_mind_reloaded_/archive/1035_what_did_you_prepared_for_ramadan_.html